Aragon အသိုင်းအဝိုင်းကိုဖွဲ့စည်းသောပြည်နယ်သုံးခုအနက် Teruel ဟာသိပ်မသိရပါဘူး။ သို့သော် ...
Praslin, Mahe နှင့် La Digue တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးနေရာများဖြစ်သော Seychelles ကျွန်းများဖြစ်သည်။
ယနေ့မတ်လ ၂၁ ရက်၊ နွေ ဦး ရာသီရောက်လာပြီးပထမဆုံးခရီးနှင့်ပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ရောက်လာသည်။
အကယ်၍ သင် Central America ကိုသိပြီးပျော်မွေ့လိုပါကကားတစ်စီးငှား။ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ၊ ဘေလီဇ်နှင့်ကော့စတာရီကာတို့တွင်လှပသောလမ်းကြောင်းသုံးခုဖြင့်ခရီးသွားပါ။ အဲဒါကိုမမေ့နိုင်ပါဘူး
ကမ္ဘာဂြိုဟ်သို့လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်း၊ အခြားယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထူးခြားဆန်းပြားသောအစားအစာများကိုအရသာရှိခြင်းသည်…
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကမင်းတို့အားရုပ်ရှင် ၁၀ ကားနှင့်ပြသပြီးသူတို့ကိုမြင်တွေ့ရရုံဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေရာများသို့သင်သွားချင်ခဲ့သည်။
မက်ဒရစ်အနီးရှိထွက်ပြေးရန်စဉ်းစားနေပါသလား စပိန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နားကချစ်စရာကောင်းတဲ့မြို့တွေကိုရှာဖွေဖို့နေရာအချို့ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ သူတို့ကိုရှာဖွေပါ
Andorra ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Tristaina ရေကန်များ
Tristaina ၏ရေကန်များသို့မဟုတ်ဆပ်ကပ်သည် Andorran ရှိ Ordino မြို့နှင့်အမြင့် ၂၃၀၀ မီတာအမြင့်တွင်တည်ရှိသည်။
Cala Corbs သည်Palamósစည်ပင်သာယာရှိ Girona ကမ်းရိုးတန်းတွင်ကျန်ရှိနေသေးသောအပျိုစင်လူစုများထဲမှ Es Castell ၏သဘာဝareaရိယာတွင်ပါဝင်သည်။
Andalusian ဆိုဒ် ၁၂၀ ကိုကြည့်ရမည်
မနက်ဖြန် ၂၈ ရက်မြောက်နေ့အန္ဒြူလီးယားလူမျိုးများနှင့်ကျွန်ုပ်သည် Andalusia နေ့အခမ်းအနားတွင် ...
Caribbean မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေကိုရှာဖွေနေပါသလား။ အကောင်းဆုံးသောကမ်းခြေများကိုခံစားနိုင်စေရန်အကောင်းဆုံးဇိမ်ခံဟိုတယ် ၆ ခုစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည်။
Fallas of Valencia သို့သွားရန်လမ်းညွှန် - အချို့သောအကြံပြုချက်များ
မကြာခင်မှာပဲကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းသောသီတင်းပတ်ကိုပျော်မွေ့မည်ဆိုလျှင်၊ မကြာမီပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗလင်စီယာ၏ Fallas ကိုခံစားနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ချမ်းအေးတာကိုသင်ငြီးငွေ့ပြီးနွေရာသီကိုသာစဉ်းစားနေသလား။ နွေရာသီသည်ကမ်းခြေ၊ ပင်လယ်တို့နှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်ပြီးလူအများစုတို့သည်နွေရာသီကိုရက်အနည်းငယ်သာမရိပ်မိကြပါ
သင်ခရီးသွားလိုသောရုပ်ရှင် ၁၀ ကား
စာအုပ်ဖတ်တာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ အကြိမ်တစ်ကြိမ်ထက်မက၊
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးသမုဒ္ဒရာ ၅ ခု
အကယ်၍ သင်သည်ပြည်ပ၌စေတနာ့ဝန်ထမ်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုပ်ချင်ခဲ့သော်လည်းမလုပ်ဝံ့ပါကဤအရာသည် ...
အိုင်ယာလန်၏အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခရီးစဉ် (၂)
အိုင်ယာလန်၏အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းသို့အကြှနျုပျ၏ခရီး၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်း။ ပထမဆုံးနေ့မှာငါ Moher of Cliffs သို့သွားလျှင်၊
Lonely Planet (II) အရ ၂၀၁၆ ၏အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု
Lonely Planet အရ ၂၀၁၆ ၏ထိပ်ဆုံးနေရာငါးခုကိုအခြားနေ့၌သင်ပြောခဲ့လျှင်ယနေ့သင့်အလှည့်သည် ...
အိုင်ယာလန်၏အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခရီးစဉ် (၁)
ငါအိုင်ယာလန်အနောက်ဘက်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်အတ္တလန္တိတ်ကမ်းခြေကိုကားနဲ့သွားခဲ့တယ်။ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရှုခင်းများareaရိယာ။ စစ်မှန်အိုင်ယာလန်။
Lonely Planet (၁) အရ ၂၀၁၆ ၏အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု
ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးခရီးသွားလမ်းညွှန်ကြေညာသူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lonely Planet ဟာလမ်းပြမြေပုံတွေအားလုံးကိုမင်းတို့သိကြမှာသေချာပါတယ်။
ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာရှိအရှည်ဆုံးကမ်းခြေများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ စပိန်မှာရှိလား သင်နေ ၀ င်ချင်သောပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေသို့ ၀ င်ပါ။
အံ့မခန်းဖွယ်အကောင်းဆုံး Nevados del Peru (၅) ကိုရှာဖွေပြီးကြီးမားသောပီရူးတောင်တန်းများမှကမ်းခြေအဖြူရောင်ရှုခင်းကိုခံစားကြည့်ပါ။
Benidorm ရှိအကောင်းဆုံးခရီးသွား places ည့်သည်များ
ဤသည်သည်သင်မမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်တစ်ခုရနိုင်မည့်အထူးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ Benidorm တွင်အကောင်းဆုံးခရီးသွား places ည့်သည်များရှာဖွေပါ။
Buenos Aires တွင်အကောင်းဆုံးခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်များ
လှပသော Buenos Aires တွင်အကောင်းဆုံးခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်များစာရင်း
Galicia တွင် Carnival တွေ့ကြုံခံစားရန်လမ်းညွှန်
ဟုတ်တယ်၊ Carnival အကြောင်းပြောရင်ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုများသောအားဖြင့်စဉ်းစားတယ်၊
စကော့တလန်၏ဇိမ်ခံရထားဖြစ်သော Belmond Royal Scotsman
လူ ၃၆ ယောက်အတွက်ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်ဖြစ်တဲ့ Belmond Royal Scotsman ဇိမ်ခံရထားနဲ့တွေ့ပါ
စပိန်၌နှင်းကျေပွန်ရန်ထွက်ပြေးရန်နေရာ ၅ ခု
ကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးအပါဆုံးချိုင့်ဝှမ်း ၁၀ ခုကိုသင်သိပါသလား။ သူတို့ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူများအတွက်ဖုံးကွယ်ထားသောထိုအံ့ဖွယ်နေရာများနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမမေ့ပါနှင့်။
Algarve သည်၎င်း၏ကမ်းရိုးတန်းတွင်ကောင်းမွန်သောကမ်းခြေအချို့ရှိသည်။ ပေါ်တူဂီတောင်ပိုင်း၏အကောင်းဆုံးbeရိယာတွင်မည်သည့်နေရာသို့လာရောက်လည်ပတ်မည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
အဆိုပါ Sleeping ခြင်္သေ့သည် Galapagos ကျွန်းများအတွက်ရေငုပ်
The Sleeping Lion (သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Kicker's Rock) သည် San Cristóbalကျွန်းစုနှင့်ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာတွင်နေသောလူနေထိုင်မှုမရှိသောကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအဲလ်ပ်တောင်တန်းများ၏ပုံမှန်တိရိစ္ဆာန်များ၊ မျိုးစိတ်များစွာနေထိုင်သည့်အလွန်များပြားသောတိရစ္ဆာန်များနှင့်သိကျွမ်းပါ။ သူတို့ကိုသင်သိချင်ပါသလား။
nudism ၏မြို့တော် Cap d'Agde
Cap d'Adge ကမ်းခြေသည်ထောင်နှင့်ချီသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများကိုဆွဲဆောင်သည်။
ဒီခရီးသွားအက္ခရာ (၁) သည်သင်မလုပ်ရသေးသောခရီးများနှင့်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သင့်ဘဝတွင်လုပ်လိုသောခရီးများကိုစီစဉ်ရန်သင့်အားလမ်းပြနိုင်သည်။ မင်းရဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Skagen ကိုဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ မယုံနိုင်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သောပင်လယ်နှစ်ဘက်နှင့်တွေ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားထူးခြားသောရှုခင်းကိုပြသည်။ မင်းအဲဒါကိုမြင်ချင်လား ဝင်!
ခေတ်သစ်ဗိသုကာကိုကြိုက်လား? လန်ဒန်ရှိလက်ရှိဗိသုကာလက်ရာများကိုသင်ပြပါမယ်။ အကယ်၍ သင်အဲဒီကိုသွားမယ်ဆိုရင်သင်လွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။
အဆိုပါ Quilotoa, အီကွေဒေါအင်ဒီး၏ပုလဲ
Quilotoa သည်အီကွေဒေါမီးတောင်ဖြစ်ပြီး crater Lake ဟုခေါ်တွင်သောမီးတောင်ကိုစုဆောင်းထားသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးမီးတောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မသေဆုံးခင်လည်ပတ်ရန်နေရာ ၁၁ ခု
မသေမှီဤ ၁၁ နေရာသည်မည်သည့်အရာနှင့်တူကြောင်းမသိဘဲမနေပါနှင့်။ သူတို့ကိုသင်လည်ပတ်ပြီးပြီလား မင်းရဲ့အနာဂတ်ခရီးစဉ်စာရင်းကိုငါတို့တိုးချဲ့ပြီးပြီလား။
ချာနိုဘိုင်းနျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံတွင်တစ်နေ့ (အပိုင်း ၂) - လေ့လာရေးခရီး
တစ်နေ့ချာနိုဘိုင်းနှင့် Prypiat နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံများတွင်ယူကရိန်း၏မြို့တော်ကီယက်မှ ၂ နာရီသာကားဖြင့်တည်ရှိသည်။ နျူကလီးယားနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်း။
ကော့စတာရီကာသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပြင်ပစွန့်စားမှုများအတွက်လက်တင်အမေရိကပရဒိသုဖြစ်သည်။ ကီလိုမီတာတစ်ထောင်နှစ်ရာကိုးဆယ် ...
Andalusia ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေ ၃ ခု
Andalusia မှာကမ်းခြေတော်တော်များများကလူကြိုက်များပြီးကြီးကျယ်တဲ့ပါ။ အကောင်းဆုံးတောင်သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ပြပါမယ်။ တောင်ဘက်ကိုသွားလျှင်သင်လက်လွတ်မသွားသင့်ပါ။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေ ၁၀ ခု
TripAdvisor မှအသုံးပြုသူများနှင့်ခရီးသွားများရွေးချယ်သော ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများကိုရှာဖွေပါ။ နောက်အားလပ်ရက်များအတွက်အိပ်မက်ဆိုးများနေရာများ။
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏အံ့ဖွယ် ၇ ခု
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးသစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ ယနေ့အရေးကြီးဆုံးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များကိုမဲပေးခြင်းဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း။
အာဂျင်တီးနားတောင်ပိုင်းရှိအကောင်းဆုံးခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်များနှင့်ခရီးသွား area ည့်သည်အများစုအတွက်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည့်ဤဒေသရှိထူးခြားသောနေရာများကိုရှာဖွေပါ။
TripAdvisor ၏အဆိုအရအားလုံးပါဝင်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးဟိုတယ် ၁၀ လုံး
Tripadvisor တွင်အကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဟိုတယ်များကိုခရီးသွားများအတွက်အားလုံးပါ ၀ င်သော package ကိုရှာဖွေနေသောခရီးသွားများကရှာဖွေပါ။ သူတို့သည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်ကြလိမ့်မည်။
အကျပ်အတည်းသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ခရီးသွားများကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲခြင်းသည်ကဏ္ for အတွက်နှင့်ခရီးသွားအဖော်ရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မင်းဘယ်လိုခရီးသွားမျိုးလဲ
မြောက်ပိုင်း Lights, သူတို့ကဘာတွေလဲသူတို့ကဘယ်မှာတွေ့မြင်နိုင်မလဲ
ဆောင်း ဦး ရာသီနှင့်ပထမဆုံးရွာသွန်းခြင်းတို့နှင့်အတူမှိုများကိုစုဆောင်းရန်ရာသီစတင်သည်။ Montseny သဘာဝဥယျာဉ်သည်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Costa Paradiso, Sardinia အတွက်အလွကမ်းခြေ
Costa Paradiso သည် Sardinia ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည့်အံ့မခန်းဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းသောရေနှင့်ကျောက်ဆောင်ကမ်းပါးများနှင့်ပြည့်နေသောကမ်းခြေများachesရိယာ။
ဟာဝိုင်ယီရှိ Poipu သဲသောင်ပြင်
လူအုပ်မပါပဲ Iguazu ရေတံခွန်ကိုဘယ်လိုလည်ပတ်မလဲ
သင် Iguazu ရေတံခွန်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်လူအများမပါဘဲအကြံဥာဏ်တွေဆက်တိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်
နယူးဇီလန်၏မယုံနိုင်လောက်အောင် Waitomo ဂူများ
Erechtheion, အေသင် Acropolis အပေါ်ကျော်ကြားဗိမာနျတျော
Golden Sands သည်ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးကမ်းခြေဖြစ်သည်
Golden Sands သည်ပင်လယ်နက်ရှိဘူဂေးရီးယားကမ်းခြေရှိအကြီးဆုံးအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်
နွေရာသီ 2015, Montenegro အတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းခြေ
တောင်အာဖရိက၏အကောင်းဆုံးကမ်းခြေများအနက် Durban ၏ကမ်းခြေ
Stiniva သည်ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ၏သီးခြားကမ်းခြေဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အလွန်တိတ်ဆိတ်စွာနေလိမ့်မည်။ ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့လေးထောင့်ကွက်ကိုရှာဖွေပါ။
ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိအလှပဆုံးကမ်းခြေသုံးခုကိုအံ့။ ။ နေပါ။ သူတို့ကလေးစားခြင်းနှင့်စဉျးစားဆငျခွထိုက်တန်ပါတယ်!
ပေါ်တူဂီရှိ Troia ကျွန်းဆွယ်၏ကမ်းခြေများ
လစ္စဘွန်းဆင်ခြေဖုံးတွင်လှပသောကမ်းခြေများမိုင်နှင့်မိုင်များရှိသည့် Troia ကျွန်းဆွယ်ရှိသည်
Rimini ကမ်းခြေ၊ သဲသောင်ပြင်ပျော်စရာနေရာ
Rimini ကမ်းခြေသည်အီတလီရှိအကျော်ကြားဆုံးနွေရာသီအစက်အပြောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာပျော်စရာအပြည့်အဝနေတဲ့ကမ်းခြေဖြစ်ပါတယ်။
Romantic လမ်း, ဂျာမနီ၏တောင်ဘက်သို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခရီးစဉ်
Romantic Road (Romantische Strasse) သည်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အကျော်ကြားဆုံးနှင့်ရှေးအကျဆုံးခရီးသွားcircuitရိယာဖြစ်သည်။
Neuschwanstein ရဲတိုက်, ဂျာမနီတောင်ပိုင်းရှိအိပ်မက်ရဲတိုက်
Corniche သဲသောင်ပြင်သို့မဟုတ် Cornisa သည်အဘူဒါဘီတွင်လူကြိုက်အများဆုံးသောကမ်းခြေဖြစ်သည်
Plitvice Lakes သည်ဥရောပရှိအလှဆုံးရှုခင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
ခရိုအေးရှားတွင်သဘာဝဥယျာဉ်ရှစ်ခုရှိသော်လည်း Plitvice Lakes သည်မူရင်းရှုခင်းများအတွက်ရေကန်များနှင့်စိမ်းသောရေများရှိရေတံခွန်များအတွက်ထူးခြားသည်။
Sokha သဲသောင်ပြင်သည်ကမ္ဘောဒီးယားပြည်နယ် Sihanoukville တွင်တည်ရှိသည်
အီတလီနိုင်ငံရှိ Tropea ကမ်းခြေ
Tropea သဲသောင်ပြင်သည်အီတလီရှိ Calabrian ကမ်းခြေတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်အံ့မခန်းဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Porquerolles, ပြင်သစ် Riviera ၏ idyllic သဘာဝခိုလှုံရာ
Porquerolles သည် Hyeres ကျွန်းစု၏အကြီးဆုံးနှင့်အနောက်ဘက်စွန်းဖြစ်သည်။
The Hamptons သို့ရောက်ရန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်း
Hamptons များသည်ပဟေlingိဆန်သောမန်ဟက်တန်မှထွက်ခွာသွားရန်ငြိမ်းချမ်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရင်ကထက်ပိုမိုခေတ်မီသောဤtoရိယာသို့သွားရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်
La Paloma, ပြင်သစ်ရှိ chic ကမ်းခြေ
La Palomar ကမ်းခြေသည်ပြင်သစ်ကမ်းခြေဖြစ်ပြီး Nice အနီးတွင်တည်ရှိသည်
ဂိုင်ယာနာရှိ Shell သဲသောင်ပြင်သည်လိပ်များဥများကိုဥများတင်ထားသည်
ဂိုင်ယာနာရှိ Shell သဲသောင်ပြင်သည်ပင်လယ်လိပ်များနှစ်စဉ်ပေါက်ဖွားရာနေရာဖြစ်သည်
Jericoacoara သဲသောင်ပြင်, ဘရာဇီးအတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းခြေတစ်ခု
ဆွီဒင် Lapland ရှိ Artic Resort Kakslautten
Artic Resort Kakslautten, Lapland ရှိ igloos
နယူးယောက်သို့လှေဖြင့်သွားနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အချက်အလက်များ။ ဘုရင်မမေရီ ၂ ရဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောအကြောင်းနှင့်ကုန်သည်သင်္ဘောပေါ်တွင်သွားရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
သြစတြေးလျ၊ ဆီနီဂေါနှင့်ကိုလံဘီယာတို့တွင်သာမကထူးခြား။ ရောင်စုံသောမြစ်များနှင့်ရေကန်များရှိသည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်မက်ဒေါ်နယ်ရေကန်သည်၎င်း၏အောက်ခြေရှိသက်တံကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။
USA Today ၏အဆိုအရကာရစ်ဘီယံရှိအကောင်းဆုံးကျွန်းများ
အမေရိကန်သတင်းစာ USA Today သည်ကမ်းခြေခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ကာရေဘီယံရှိအကောင်းဆုံးကျွန်းများစာရင်းကိုပြုစုခဲ့သည်
လစ္စဘွန်း (၁) ၏စိတ်ကူးယဉ်အမြင်များ
အစိမ်းရောင်မြင်းခွာ - Zagreb မှတဆင့်ပန်းခြံစင်္ကြံ
မြို့လယ်areaရိယာ၏ Zagreb ၏outရိယာကိုအဓိကတောင်ကုန်းနှစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော U သည်ပုံစံဖြင့်ချိုင့်ဝှမ်းတစ်ခုမှဆွဲတင်ထားသည်။
မြေထဲပင်လယ်အတွင်း5အံ့မခန်းကမ်းခြေ
Titan Crane, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်
Clydebank ရှိ Glasgow နှင့်အလွန်နီးကပ်သောနေရာတွင် Titan Crane သို့မဟုတ် Titan Crane သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
Melanesia, မြင်နေရကျိုးနပ် Oceania ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
ဖီဂျီ၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီ၊ ဆော်လမွန်ကျွန်းစုနှင့်ဗနူတူတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောမယ်လနီးရှားသည်အိုစီနီးယားနိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်တွင်တွေ့မြင်ရကျိုးနပ်နှစ်ခုခေတ်သစ်အဆောက်အ ဦး များ
ဒီနေ့မှာပြင်သစ်နိုင်ငံက Sainte-Marie de La Tourette နဲ့ Gare de Saint-Exupery တို့လိုလှပတဲ့အဆောက်အအုံနှစ်ခုအကြောင်းပြောနေတာပါ။
သီရိလင်္ကာ။ ။ အိန္ဒိယကမ်းခြေပရဒိသု
Eagle သဲသောင်ပြင်, Aruba အတွက်ဝတ်လစ်စလစ်ကမ်းခြေ
Eagle သဲသောင်ပြင်သည် Aruba ကျွန်းပေါ်ရှိလှပသောကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်ပြီး nudism ကိုခွင့်ပြုထားပြီးကာရစ်ဘီယံ၏အခွင့်ထူးများကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။
Eiserner Steg, Frankfurt ရှိသံတံတား
Eiserner Steg (သို့) သံတံတားသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဂန္ထဝင်ဖရန့်ကန့်သို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လက်လွတ်မသွားနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Sonkajärviအတွက်ဇနီး Rising ပွဲတော်
ဖင်လန်နိုင်ငံSonkajärviတွင် Wife Rising ပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလေ့ရှိပြီးရိုးရှင်းသည့်ဗိုက်ကင်းစတိုင်တွင်ကျင်းပသည်။
Palawan ကျွန်းစုတွင်တည်ရှိသော El Nido သည်ဖိလစ်ပိုင်ရှိအလှပဆုံးကမ်းခြေများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးနေနှင့်ကမ်းခြေခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှာဖွေမှုအများဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
Ko The Phi Lee သည်သဲသောင်ပြင်တွင်ရိုက်ကူးခဲ့သည့်လှပသောပရဒိသုဖြစ်သည်
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့စွန်ပလွံပင်အချို့ကိုသွားလည်မယ်။ Palmeral de Elche ဖြင့်စတင်ကြပါစို့။
အကောင်းဆုံး nudist ကမ်းခြေ (၁၅)
၁ - Montalivet (ပြင်သစ်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘာဝလှုပ်ရှားမှုသည် ၁၉၅၀ တွင်စတင်ခဲ့ပြီးဂုဏ်ပြုခံရသည်။
အကောင်းဆုံးဝတ်လစ်စလစ်ကမ်းခြေ ၁၅ ခု (၁)
Palmyra ၏စပ်စု atoll
ကမ္ဘာပေါ်ရှိဒုတိယအကြီးဆုံးကျွန်းမှာနယူးဂီနီကျွန်းဖြစ်သည်။ Itရိယာ ၈၀၀ နီးပါးရှိသည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် Oceania ရှိအရေးကြီးသောလေကြောင်းလိုင်းအချို့နှင့်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ၏အရေးကြီးဆုံးနှင့်သမိုင်းဝင်လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သော Qantas ကိုစတင်ဖော်ပြခြင်းဖြင့်စတင်ကြပါစို့။
La Manga del Mar Menor နယ်မြေ
အီတလီမှာရှိတဲ့ Capri ကျွန်း
Molinos ၏ Crystal Grottoes (Teruel)
ကမ္ဘာ့အူသိမ်သည်ဥရောပတွင်ထူးခြားသောသဘာဝဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ ဒီနေရာမှာ ...
စူပါဇိမ်ခံဟိုတယ်များ။ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးအခန်း ၁၀ ခန်းစာရင်း
အဆိုပါ Portfolio ပေါ်တယ်။ com သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိဈေးအမြင့်ဆုံးအခန်း ၁၀ ခန်းနှင့်စာရင်းပြုစုထားပြီး…။
Point Salinas လေဆိပ်အနီးတွင်ဤအံ့ဖွယ်ကမ်းခြေသည် Granada ရှိထင်ရှားသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏တည်ငြိမ်သောရေများ ...
Bahamas၊ Ocho Rios နှင့် Cozumel: ကာရစ်ဘီယံပုလဲများ
ဒီနေ့မှာတော့ကာရစ်ဘီယံကျွန်းစုများနှင့်ခရီးသွား most ည့်သည်အများဆုံးကျွန်းအချို့ကိုကျွန်တော်တို့လည်ပတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုစလိုက်ကြရအောင် ...
Pentataria, ယနေ့ Ventotene အဖြစ်လူသိများသည်ပင်လယ်ထဲ, Gaeta ပင်လယ်ကွေ့တွင်တည်ရှိပြီး Pontine ကျွန်းစုတစ်ခုဖြစ်သည် ...
အာရှရှိအကောင်းဆုံး Discos များ၊ ကလပ်များနှင့်ဘားများ (အပိုင်း ၁)
ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာရှသို့သွားရန်၊ ဂူဗိမာန်များ၊ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအကြောင်းစဉ်းစားသောအခါ ...
Pernambuco ရှိကမ်းခြေများ၊ Fernando de Noronha (II)
Fernando de Noronha ၏လှပသောကမ်းခြေများနှင့်အတူဆက်လက်: Playa del Boldróဒါဟာအရှိဆုံးမကြာခဏတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါဟာရှိပါတယ် ...
Vieques ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများ (အပိုင်း ၁)
Puerto Rico မှာတစ်ပတ်နေချင်ပါသလား ဗီယက်စ်ကျွန်းကိုသွားရအောင် ...
Langkawi အားလပ်ရက်အပန်းဖြေမှုအကောင်းဆုံး - ဘယ်သို့ရောက်ရန်နှင့်မည်မျှသုံးစွဲရမည်နည်း။
Langkawi ဟူသောအမည်မှာ "တပ်မက်ခြင်း၏နိုင်ငံ" ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။
အင်ဒိုနီးရှားရှိ Maluku ကျွန်းများ
ဓာတ်ပုံအကြွေး: a_rabin Moluccas (အင်ဒိုနီးရှား၊ Maluku) သည်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီးအဓိကမြို့သည် Ambon ဖြစ်သည်။
Krabi ဘယ်လိုသွားရမလဲ? လေနှင့်ကုန်းလမ်း
သင် Krabi သို့သွားရန်စိတ်ဝင်စားပြီး၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုမသိပါကဤနေရာတွင်မတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့်သင့်အားထောက်ပံ့ပေးပါမည်။
"topless" လေ့ကျင့်ရန်အကောင်းဆုံးကမ်းခြေ (အပိုင်း 3)
Guilin ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ ပျံသန်းမှု, ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကား
Guilin သည်တရုတ်နိုင်ငံ Guangxi Zhuang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏အနောက်မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ ရရန်
ဘာရိန်းကမ်းခြေများ - ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ရှိအခြားနေရာတစ်ခု
ကွဲပြားသောအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်တစ်ခု၊ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုနှင့်အတူကောင်းကင်၊ ထူးခြားသောနေရာ၌တွေ့ကြုံရန်အချိန်တန်ပြီဟုသင်ထင်လျှင် ...
ဒဏ္Indiaာရီအိန္ဒိယကိုသွားဖို့စဉ်းစားနေသလား။ နေရာထိုင်ခင်း၊ ခရီးစဉ်နှင့်အခြားသူများအကြောင်းမစဉ်းစားမီ ...
တန်ဇန်းနီးယားရှိမာဖီးယားကျွန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ လုံးဝ
မာဖီးယားကျွန်းသည်တန်ဇန်းနီးယားကျွန်းစု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးဇန်ဇီဘာနှင့်ဘမ်ဘာတို့နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ တစ် ဦး အဖြစ် ...
Curaçaoရှိထိပ်တန်းဟိုတယ် ၅ ခု
1.- Avila သဲသောင်ပြင်ဟိုတယ် Avila သဲသောင်ပြင်ဟိုတယ်သည်မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နောက်ထပ်သမိုင်းကြောင်းရှိသည်။
Aruba ရှိထိပ်တန်းဟိုတယ် ၃ ခု
Aruba တွင်သင်၏ရွေးချယ်မှုကိုခက်ခဲစေနိုင်သောဟိုတယ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ ...
လုံးဝ Bahamas အကြောင်းကိုအရာအားလုံး
ကျွန်ုပ်တို့သွားမည့်နေရာနှင့်စပ်လျဉ်း။ စပ်စုသောအချက်အလက်များကိုသိခြင်းသည်အမြဲစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်တို့အဘို့အရာခပ်သိမ်းကိုငါတို့ပြင်ဆင်ပြီ။
ကျူးဘားနိုင်ငံ Havana တွင်သင်လက်လွတ်မခံသင့်သောနေရာ ၁၀ နေရာ
ကျူးဘားသည်ကမ်းခြေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုပေါင်းစပ်သောကြောင့်ငါကြိုက်သည့်နေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ကျူးဘားသို့သွားသောအခါ ...
အင်္ဂလန်၊ စကော့တလန်၊ ဝေလနယ်နှင့်အိုင်ယာလန်အကြားအိုင်ယာလန်ပင်လယ်တွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ဗြိတိသျှသရဖူ၏မှီခိုသောနယ်မြေဖြစ်သည်။
အစ္စတန်ဘူလ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ရေချိုးသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဝတ်လစ်စလစ်ကမ်းခြေ ၁၀ ခု
GoNOMAD.com ၏အဆိုအရကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဝတ်လစ်စလစ်ကမ်းခြေ ၁၀ ခု စာရင်းများသည်အမြဲပင်ပုဂ္ဂလဒိare္ဌာန်ရှိသည် (အကြံပြုချက်များကိုလက်ခံပါသည်၊ သင်ဘာလဲ ... )
Mauritius ရှိအကောင်းဆုံးဟိုတယ်များနှင့်အပန်းဖြေစခန်း ၁၀ ခု
Mark Twain က Mauritius ကိုပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ သူ၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီကောင်းကင်ကိုဖန်တီးခဲ့သည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။ TO …
4 ရက်အတွင်း Corfu ရဲ့အကောင်းဆုံး
Corfu သို့အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ရန်မှာတစ်နေ့လျှင်လေကြောင်းဆက်သွယ်မှုများစွာရှိသောအေသင်မှဖြစ်သည်။ အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု ...
Langkawi, မလေးရှားအလွန်လူကြိုက်များကမ်းခြေ ဦး တည်ရာ
Langkawi သည်ကျွန်းစု (၉၉) ခုရှိပြီးကျွန်းစု (၉၉) ခုမှာနယ်စပ်နီးပါးမလေးရှားအရှေ့မြောက်ဘက် Andaman Sea တွင်ရှိသည်။
အနည်းဆုံးကျူးဘား၏ကမ်းခြေ: Santa María del Mar
ကျူးဘားရှိကမ်းခြေများကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသောအခါ၊ ငါတို့ပထမဆုံးစဉ်းစားရန်မှာ Varadero ကမ်းခြေဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျူးဘားအများအပြားရှိပါတယ် ...
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ Bohol ရှိကမ်းခြေများ၊ မျောက်များနှင့်တောင်တန်းများ
သင်ကဖိလစ်ပိုင်ကိုသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင် Bohol ဟာသင်မလွဲနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ Bohol ...
တည်နေရာCuraçaoသည်ကာရေဘီယံ၏အနောက်တောင်ဖက်တွင်၊ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၂ °နှင့်အနောက်လောင်ဂျီတွဒ် ၆၈ တွင်တည်ရှိသည်။ The …
Cancun ရှိအဆိုးဆုံးဟိုတယ် ၁၀ ခု
TripAdvisor အသုံးပြုသူများအဆိုအရ Cancun ရှိအဆိုးဆုံးဟိုတယ် ၁၀ ခုမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - Aristos Cancun Plaza ဟိုတယ်၊
အကယ်၍ သင်သည်အာရှသို့မရောက်သေးပါကစင်္ကာပူသည်စတင်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကတည်းက ...
သင်၏ခရီးစဉ်အတွက်စီစဉ်ခြင်း - ၁။ အာရှသို့ပျံသန်းခြင်း။
1.- လွတ်လပ်သောခရီးသွားများအတွက်, ဆိုက်ရောက်လေဆိပ်အရေးမထားဘူး။ ဒါဟာ၏ရက်စွဲများဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် ...
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Kohi-Phi တွင်ရေငုပ်ခြင်း
အရှေ့တောင်အာရှနှင့် ပက်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာခရီးစဉ်တစ်ခုတည်းတွင်လွယ်ကူစွာပေါင်းစည်းရန်ဖြစ်သည်။